“Mucaarad iyo xukuumad waxba faraha kuma hayaan, waxaa la dhisayaa Baarlamaan uu leeyahay al Shabaab” – Kalfadhi
“Mucaarad iyo xukuumad waxba faraha kuma hayaan, waxaa la dhisayaa Baarlamaan uu leeyahay al Shabaab”
December 5, 2020 December 5, 2020 Hassan Istiila
Wasiirkii hore ee Waxbarashada, ahna xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka C/llaahi Goodax Barre, oo ku sugan dalka Turkiga ayaa niyad-jab ka muujiyay doorashadda xildhibaannada sannadkan 2020-21 iyo is-qab-qabsiga mucaaradka iyo xukuumadda in ay dan ugu jirto al Shabaab.
Mudane Goodax, ayaa sheegay in macaquul ay u muuqato, marka aad dhegeysto doodaha mucaaradka iyo Xukuumadda iyo sida ay garta uga baxayaan, balse isaga waxaa u muuqda in labaduba aysan waxba faraha ku heynin.
“Nooca ay wax u socdaan waxaan u arkaa in la dhisaayo Baarlamaan uu leeyahay al Shabaab, xaqiiqduna waa taas. Maxaa yeelay ergadan meel ay ku noolaadan ayey rabaan, xal ma ahan in maanta xitaa doorasho la qabto. Haddii qof uu is leeyahay waxbaad boobeysaa, adigana waxaa ku boobi doona al Shabaab, marka al shabaab miyaan u shaqeyneynaa” ayuu yiri.
“Waxaad moodaa aragtida iyo shaqada socota in ay al shabaab u daneyneyso, macno ma sameyneyso qori iyo dagaal lagala hortago al Shabaab, haddii canshuur ay qaadayaan maxaa laga hadlayaan, haddii al Shabaab qofka ay rabaan ay xamar ku qarxinayaan muxuu macnaha uu sameeyay dagaalka”.
Bishii November ee sannadkan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in uu ka cabsi qabo in doorashada nagu soo aadan ee Soomaaliya lasoo dooran doono xildhibaano si dadban ay u maamulaan Al Shabaab.
Madaxweyne Geelle oo wareysi siinayay The Afrika Report ayaa yiri “Doorashada baarlamaanka Soomaaliya waxaa la filayaa inay qabsoonto sanadka 2021-ka, waxaan ka cabsi qabaa inay kusoo afjaranto doorashada xildhibaano si dadban ay u maamulaan Al Shabaab maadama ay gadan karaan taageerada qaar kamid ah xildhibaanada”.
Midowga Musharraxiinta oo walaac ka muujiyay in Wasaaradda Badroolka ay ku dhiirrato bixinta ruqsadaha barista Batroolka